အဆိပ်ပြင်းပြီး ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အများဆုံး မြွေကြီးများကို မွေးမြူထားသည့်ပါလက်စတိုင်းလူငယ်တစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း - Xinhua News Agency
ရာမာလာ၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
လူအချို့အတွက် အရွယ်အစားကြီးမားပြီး အန္တရာယ်များသော စပါးအုံးမြွေအမျိုးအစား တွားသွားသတ္တဝါများကို ကြောက်လန့်လေ့ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ပါလက်စတိုင်းအနောက်ဘက်ကမ်းတွင်နေထိုင်သည့်အသက် ၂၀ အရွယ် မိုဟာမက် နတ်စ်ရီ ဆိုသူ လူငယ်လေးသည် ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အများဆုံး မြွေကြီးများကို အောင်မြင်စွာထိန်းကျောင်း မွေးမြူပြီး အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်လျက်ရှိသည်။
အစိမ်းရောင်အန်နာကွန်ဒါမြွေကြီး၊ ကြွက်စားမြွေများ၊ အိန္ဒိယမြွေဟောက် ၊မြန်မာစပါးအုံးမြွေ နှင့်အခြားသော အဆိပ်ပြင်းမြွေနှင့် အဆိပ်မဲ့မြွေများစွာကို ၎င်း၏ နေအိမ်၌မွေးမြူထားသည်။
မိုဟာမက် နတ်စ်ရီ သည် မြွေများအားလုံးကို အိမ်အပြင်တွင် အဆောင်ကျယ်ကျယ်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ကာ မွေးမြူထားသည်။ မြွေများကို သင့်တော်သောအစားအစာနှင့် ကြီးထွားရန်လိုအပ်သည့်အပူချိန်အောက်တွင် မွေးမြူထားသည်။
“ကျွန်တော်အသက် ၁၂ နှစ်တုန်းက ပထမဆုံးမြွေလေးတစ်ကောင်ကို ဝယ်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီမြွေလေးက ၃၀ စင်တီမီတာပဲရှိတဲ့ ကြွက်စားမြွေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် လပေါင်းများစွာ စုထားတဲ့ငွေထဲကနေ ဒေါ်လာ ၅၀ နဲ့ဝယ်ခဲ့တာပါ” လို့ သူက ဆင်ဟွာသတင်းထောက်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။
သူက မြွေများကို မည်သို့စောင့်ရှောက်မွေးမြူရမည်ကိုမသိခဲ့ကြောင်း ထို့ကြောင့် အင်တာနက်မှ ရှာဖွေကာ လေ့လာခဲ့ရကြောင်းသူကဆိုသည်။
“ ကျွန်တော် တွားသွားသတ္တဝါတွေ၊ မြွေတွေ၊ စပါးအုံးမြွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ အများကြီးကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါအန္တရာယ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ရတာပေါ့”လို့သူကပြန်ပြောင်းပြောပြသည်။
နတ်စ်ရီ ၏ ကောင်းမွန်စွာပြုစုမှုကြောင့် သူမွေးမြူထားခဲ့သည့် မြွေလေးမှာ ၇၀ စင်တီမီတာအထိ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ထိုမြွေလေးသေဆုံးသွားသည့်အခါ၌ နတ်စ်ရီ မှာ ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
“ကျွန်တော့်ရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားသလိုကိုခံစားခဲ့ရတာပါ၊ ကျွန်တော် သိပ်ပြီးဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်၊ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် သေဆုံးသွားတဲ့ မြွေလေးထက်ပိုကြီးပြီး ပိုရှည်တဲ့ နောက်ထပ်မြွေတစ်ကောင်ကိုဝယ်မွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်”
နတ်စ်ရီ သည် အဆိပ်မဲ့မြန်မာ့စပါးအုံးတစ်ကောင်ကို ဝယ်ရန်အတွက် တစ်နှစ်လုံးငွေစုခဲ့သည်။ ထိုမြွေမှာ ၆၀ စင်တီမီတာအရှည်သာရှိသော်လည်း အစားအသောက်ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးမှုနှင့် ကောင်းစွာမွေးမြူစောင့်ရှောက်မှုတို့ကြောင့် ၄ မီတာခန့်အထိရှည်လာခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် အဲဒီမြွေကို ဒေါ်လာ ၁,၃၀၀ နဲ့ ရောင်းလိုက်ပါတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်အသက် ၁၅ နှစ် အရောက်မှာ ဒေါ်လာထောင်နဲ့ချီဝင်ငွေရှာခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကျွန်တော့်အတွက်သိပ်ပြီးတော့အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူလို့ကိုမဆုံးပါဘူး” ဟုဆိုသည်။
ထိုအချိန်တွင် နတ်စ်ရီ သည် ၎င်း၏ ဝါသနာကို စီးပွားရေးတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲရန်သဘောပေါက် ခဲ့သည်။အစပိုင်းတွင် အမေရိကန်မြောက်ပိုင်း၌ကျက်စားသည့်မြွေမျိုးဖြစ်သည့် chicken snake မြွေများကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး လပေါင်းများစွာမွေးမြူပြီးနောက် ဒေါ်လာ ၅,၀၀၀ နှင့်ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် သူသည် အတုမရှိထူးခြားလှသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖန်တီးရန် အကြီးဆုံးနှင့် ကမ္ဘာ့အန္တရာယ် အရှိဆုံး မြွေများဖြစ်သည့် အန်နာကွန်ဒါစပါးအုံးအပါအဝင်၊ အာရှတိုက်အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းမျိုးရင်း ဖြစ်သည့်ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးဟုသတ်မှတ်ထားသည့် reticulated စပါးအုံးနှင့် အာဖရိကန်မျိုးရင်း အဆိပ်အပြင်းဆုံး rock စပါးအုံးတို့ကိုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းမှာ အိန္ဒိယ မြွေဟောက်နှင့်အခြားမြွေအမျိုးအစား ၁၀ မျိုးခန့်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
“ကျွန်တော် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကမြွေမွေးမြူရေးသမားတွေကိုလေ့လာပြီးတော့အိမ်မှာမွေးဖို့ မြွေတစ်ကောင်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဝါသနာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့စွဲလမ်းလာပြီးကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံးမြွေမျိုးစိတ်တွေကိုမွေးမြူဖို့ရှာဖွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်ဟာ ပါလက်စတိုင်းမျိုးစိတ်မြွေတွေကိုအသားကျလာတဲ့အခါ အဆိပ်ရှိတဲ့မြွေနဲ့ အဆိပ်မရှိတဲ့မြွေကိုခွဲခြားတတ်လာခဲ့ပါတယ် “ဟုဆိုသည်။
“လက်ရှိကျွန်တော့်ဆီမှာမြွေကြီး ၁၀ ကောင်လောက်ရှိပြီးတော့ မြွေအသေး ၁၂ကောင် ကိုမွေးမြူ လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်” ဟုသူကဆိုသည်။
နတ်စ်ရီ သည် လက်ရှိတွင် Brizeit တက္ကသိုလ်တွင် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တွားသွားသတ္တဝါများအား အစာအဖြစ် ကျွေးမွေးရန် ကြွက်များယုန်များကို မွေးမြူထားသည့် မွေးမြူရေးခြံတစ်ခြံကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
နတ်စ်ရီ ၏ စိတ်ကူးအိပ်မက်များသည် ထိုမျှဖြင့်မရပ်တန့်ချေ၊ လက်ရှိတွင်သူသည် အဆိပ်ပြင်းမြွေများကိုမွေးမြူရန်စီစဉ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ အဆိပ်ဖြင့်ဆေးဝါးဖော်စပ်ရာတွင်အသုံးပြုရန် အထူးသဖြင့် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
သို့ရာတွင် ၎င်း၏ စိတ်ကူးမှာ ပါလက်စတိုင်းသားတို့၏ နေ့စဉ်လူမှုဘဝနှင့် ဆန့်ကျင်နေသည်။ မြွေများ၏ အဆိပ်မှ ပဋိပစ္စည်းထုတ်ယူနိုင်သည့် သိပ္ပံနည်းကျဓါတ်ခွဲခန်းများလည်းမရှိသေးချေ။
“တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မှာသာ မြွေဆိပ်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ မြွေဆိပ် တစ်ဂရမ်ကို အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၄ထောင်နဲ့ရောင်းမှာပါ” လို့ နတ်စ်ရီက ရယ်ပြုံးရင်းဆိုသည်။
ယခုမှစ၍ လာမည့် ၁၀ နှစ်အတွင်း နတ်စ်ရီမှာ ၎င်း၏ အမည် တွင်ကျန်စေမည့် ကိုယ်ပိုင်မွေးမြူရေးခြံတစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် နှင့် ထိုခြံထဲတွင် ထူးခြားသောတိရစ္ဆာန်များနှင့်တွားသွားမျိုးစိတ်များစွာကို ထည့်သွင်းမွေးမြူရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ (Xinhua)
Young Palestinian makes living from giant, dangerous snakes
RAMALLAH, Oct.4(Xinhua) — For some people, giant and dangerous snakes like pythons are reptiles to be feared. But Mohammed Nassri,a20-years-old Palestinian living in the West Bank, has successfully tamed some of the world’s most dangerous snakes and makeadecent living from them.
A green anaconda, corn snakes, an Indian cobra, Burmese python, and tens of other venomous and non-venomous snakes foundaharbor at his home.
All of them are kept insideavast room built outside of his house. He provides them with suitable food and heat necessary for their growth.
“When I was only 12 years old, I bought my first small snake. It wasa30-cm corn snake which cost me 50 U.S. dollars from the savings I have been collecting for several months,” the young man told Xinhua, while he was wrapping the yellow snake on his shoulders.
Back then, he said, he did not know how to take care of the snakes. So he surfed the Internet for answers.
“I watched dozens of films about reptiles, snakes, and pythons and how we can deal with them without putting ourselves in dangerous situations,” he recalled.
Nassri’s hard work paid off as his “little friend” grew bigger, reaching 70 cm. But then it died, leaving Nassri heartbroken and sad.
“I felt that I lost one of my best friends. I criedalot, but I decided to buy another one raise it longer and bigger than my first corn snake,” he recalled.
Nassri spentawhole year saving enough move to buyanon-venomous Burmese python. It was 60-cm long, but with good food and conditions, it grew to be as long as four meters.
“I sold it for 1,300 U.S. dollars and I made some hundreds of dollars when I was 15 years old. It wasagreat emotion for me and I was so proud of myself,” he said.
It was when Nassri realized that he could turn his hobby intoabusiness. Initially, he bought chicken snakes, whom he raised for months before selling them and making some 5,000 dollars.
Then, in order to be “unique and special,” he decided to buy the heaviest and most dangerous snakes, including anaconda python, rock python, and reticulated python. Later, he also purchased the Indian cobra and tens of other snakes.
“Currently, I possess ten big snakes, as well as dozens of small snakes and I managed to tame all of them,” he said.
To feed them, the young man, who is nowastudent of business administration at Birzeit University, establishedasmall farm, where he raises rats and rabbits that are being fed to the reptiles.
Yet, Nassri’s dream does not stop at that. Now he is planning to raise venomous snakes and use their venom for medical purposes, especially to develop anti-snake vaccines.
His dreams, however, collide with the daily Palestinian reality. There are no scientific laboratories that would extract antibodies from snake venom.
“If we have techniques to extract the snake venom, we will sell each gram of it for 4,000 dollars at least,” he said, as he flashed his smile.
After ten years from now, he aspires to establish his own farm that would carry his name, and that would contain all sorts of unique animals and reptiles. He is also hoping this place will end up becomingatourist attraction.&nbsp; ■